Saafi Films - News: Halkan ka Aqriso Taariiq nololeedka Madaxweynihii Geeriyooday ee Dalka Venesuela Hugo shaves ?
Halkan ka Aqriso Taariiq nololeedka Madaxweynihii Geeriyooday ee Dalka Venesuela Hugo shaves ?
Hugo Chaves wuxuu dhashay 28 July 1954,isagoo ku dhashay Guriga ayeeyadii Rosa In�z Ch�vez oo ku yaala Gobolka Sabaneta Barinas ee dalkaasi.
Asal ahaan qoyska Madaxweyhihii geeriyooday ee Chaves waxay ka soo jeedeen qoys dhaqaalahooda dhexdhexaad iska ahaa.
Hugo Caves wuxuu ahaa canuga labaad ee todobo carruur oo abihii uu dhalay uu ku jiro midkooda ugu weyn oo lagu Magacaabo Ad�n Ch�vez.
Hugo Chaves oo saboolnimo ku soo barbaaray ayaa isaga iyo walalkii ka weyn Ad�n Ch�vez,waxay markii danbe la noolaayeen ayeeyadood Rose,markaasi oo nafsatooda ay ahayd mid iska liidata.
Hugo Chaves ayaa waxbarashadiisa ka soo bilaabay Juli�n Pino Elementary School,wuxuuna waxyaabihii uu jeclaa ka mid ahaa,Sawirada,rinjiyeynta,Baseballka iyo Taariikhda,wuxuuna si gaar ah u xiiseyn jiray Chaves qarnigii 19, federalist gaar ahaan bug la yiraahdo Ezequiel Zamora,
Sanadka markuu ahaa 1960,Madaxweynaha geeriyooday ee Hugo Chaves, walaalkiis iyo ayeeyadiis waxay u soo guureenn Magaalada Barinas,halkaasi oo ya ka sii wateen waxbarashadooda.
Dugsiga Militariga : 1971�1975 Military Academy: 1971�1975
Madaxweynaha shacabka ay jecel yihiin ee Hugo Chaves oo maanta geeriyooday ayaa da�diisu markay ahayd 17,sano jir,wuxuu go�aansaday inuu ku biiro Dugsigii barashada Malitariga iyo Sayniska ee ku yaala magaalada Caracas.
Wuxuuna furumaha hore ka galay ardaydii ugu horeysay ee waxka barata Dusigaasi,isagoona noqday qof wadani ah oo wax ka yaqaan arimaha Malitariga,waxayna arintaan ku sii dhiira gilisay Mr Chaves inuu sii hormariyo aqoontiisa.
Waxii xiligaasi ka danbeeyay wuxuu ku noolaa Magaalada Caasimada ah ee Caracas Madaxweyne Hugo shaves oo noloshiisa ku soo bilaabatay Nolol mugti ah ayaa ugu danbeyn dadaal dheer uu sameeyay wuxuu gaaray heer caalami ah,isagoona si weyn loogu qadari jiray arimaha Malitariga iyo waliba cadaalada.
Wuxuu sidoo kale bilaabay inuu u dhaqdhaqaaqo arimaha bini�aadanimada wuxuuna madaxweyne Hugo Chaves yaraantiisii aad u jeclaa kubbada Usha lagu dheelo,isagoo ku biiray kooxda kubbada usha ee dalkaasi.
Waxyaabaha shacabka aanu ku iloobi Karin ay ku xasuustaan waxaa ja mid ah Chaves nin shacabka ukala xaqsoori jiray,shacab jeeceel oo mar waliba wuxuu jeclaan jiray inuu shacabkiisa dhexda kaga jiro.
1974,waxa loo doortay Chaves in uu noqdo wakiil xusitaankii Sanad guuradii ka soo wareegatay 150 sano markaasi oo dhacay dagaal loogu magac daray Battle of Ayacucho in Peru,Hugo Chaves ayaa lagu xasuustaa inuu ahaa halgamaa weyn oo dalka iyo dibada si weyn loogu yaqaano.
Shaqadii uu ka soo qabtay Malitariga. 1976�1981
Qalinjibintiisii wuxuu Chaves noqday Madaxa isgaarsiinta la dagaalanka Muqaawamada oo xiligaasi ka dhisnaa Magaalada Barinas.
Madaxweynaha Venesuela ee geeriyooday ayaa dhanka kale waxa la tilmaamay inuu qeyb ka ahaa dowladii la dagaalantay Masu maasuqa dalkaasi horay ugu jiray,ka dib wuxuu bilaabay inuu aas aaso xisbiga Red Flag Party,sababta loo aas aasayna waxay ahayd in dalka horamar la gaarsiiyo.
Madaxweynaha geeriyooday ee dalka Venesuela Hugo Chaves ayaa markiisii ugu horeysay ee uu isku soo sharxo Madaxtinimada dalka waxay ahayd 2 February 1999 ilaa iyo 10 January 2000.markaasi oo dhacay caleema saarkiisa.
Waxaana hadaladiisa lagu xasuusta ka mid ahaa inuu wacad ku maray inuu adkeyn doono dastuurka dalka horayna u sii wadi doono,isagoona dalka iyo dadkaba uu ku dadaali doono sidii uu u gudan lahaa waajibaadka saaran. �Dalkeena maanta wuxuu ahaan doonaa mid hanta wadaag ku shaqeeya ama geeri ayaa ku dhacayso�
Inkastoo madaxweynaha dalkiisa uu wax badan ka qabtay haddana aan eegni xiriirkiisii arimaha dibada ee dowladiis.
Chaves madaxweynaha geeriyooday waxaa lagu xanuustaa waxka badalidii siyaasiyada Venezuela ee dalalka caalamka.
Chaves wuxuu xiriir dhow la lahaa madaxweynihii dalka Cuba Fidel Castro,madaxweynihii la dilay ee dalka Libya Mucamar Alkhadaafi,madaxweynaha Dalka Iran Axmed Dinijad iyo madaxweynaha dalka Syria Bishaar Al Asad.
Madaxweyne Chaves ayaa aad u necbaa dowlada Maraykanka intii xukunka uu hayay Bush,wuxuuna ku tilmaamay dalkaasi inuu ahaa dal boqortooyo ah,wuxuna marayka ku sheegay inuu taageerayay afgambi la doonayay in xilka looga tuuro ,wallow xukuumada Washington ay beenisay arintaasi.
�SHalay sheydaanka halkaan ayuu ku sugnaa,waa isla goobtaan oo aan aniga doonayo inaan goobtaan ka jeediyo qudbad,waxaa halkaan laga dareemayaa ur xun oo kasoo baxaya� Shacabka ayaa si aad u jecel Madaxweynahan iminka geeriyooday,wuxuuna talada dalkaasi hayay mudo 14-sano ah,isagoo marar badan dib loo sii doortay.
Waxaana haatan dalka Venesuala ka jira murogo ay muujnayaan shacabka iyo saraakiisha dowlada sida ay kaga xun yihiin geerida ku timid Madaxweynahooda.
Madaxweynaha ayaa in mudo ah xanuunsanayay,isagoo xaalad caafimaad aan fiicneyn kala soo laabta dalka Cuba,isalamarkaana sheegay in dawooyinkiisa ku qaadayo dalkiisa,taasi oo shacabka ay ku faraxeen.
Chaves ayaa in mudo ah ka soo muuqan shaashadaha caalamka xanuun awgii.
Madaxweynaha ayaa dhalay seddex gabdhood,xaaskiisii koowaad waxay u dhashay labada gabdhood eekala ah Rosa Virginia iyo Maria Gabriela waxaana xaaskiisii labaad ay dhashay Marisabel Rodriguez.
Madaxweynaha waxaa qaliin cudurka kansarka lagu sameeyay afar jeer markii uu ku dhawaaqay sanadkii 2011 inuu qabtay xanuunkaasi dalka Cuba ayaana lagu soo dhaweeyay,waxaana uu kusoolaabtay isaga oo xaladiisa ay wanaagsan tahay Madaxweyne ku xigeenka dalkaasi Mr Maduro oo ay ku hareeraysanayeen masuuliyiin kale oo dowlada ka tirsan ayaa ku dhawaaqay geerida madaxweynaha habeenimadii xalay.
Masuuliyiin badan oo caalamka ka tirsan ayaa ka jawaab celiyay geeridii madaxweynihii dalka Venezuela.
War qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in taladii Chaves inay Venezuela u aheyd xilli isbeleed oo uu dalka dareemay.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in dalka Venezuela uu galayo taariiq cusub,isagoo sheegay in dowladiisa ay sii wanaajin doonto xiriirka kala dhaxeeya dalkaasi.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Banki Moon ayaa sheegay inuu tacsi u dirayo qoyska iyo shacabka Venezuela oo ku aadan geerida hogaamiyahoodii.
Safiirka Ruushka ee Qaramada Midoobay Vitaly Churkin ayaa sidoo kale warqoraalka ah oo uu soo saaryay wuxuu ku sheegay in Chaves uu ahaa siyaasi weyn oo dalkiisa iyo dunida oo dhan ah.
Madaxweynaha dalka Bolivia Evo Morales ,oo si aad ah ay isugu dhawaayeen Chaves ayaa sheegay in Chaves uusan dhiman laakiin fikirkii uu ka tagay walli uu nool yahay.
Elias Jaua,wasiirka arimaha dibada Venezuela ayaa ku dhawaaqay muddo todobo maalin oo baroordiiq ah
4,539,508 unique visits